ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး Vero ၏ bulk China Manufacturer
ခွေးရူးအောင်ကာကွယ်နိုင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။,အလင်း မှစ. Protected,ဒီထက်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှု
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Asia ထုတ်ကုန်: 1% - 10% Cert: GMP ဖေါ်ပြချက်: ခွေးရူးအောင်ကာကွယ်နိုင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။,အလင်း မှစ. Protected,ဒီထက်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှု
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး > ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် > ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး Vero ၏ bulk
 ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး Vero ၏ bulk
နှစ်ခုပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေ, သည်အထိနီးပါးခွေးရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူအားလုံးရောဂါကူးစက်မှုသည်သေခြင်း၌ဖြစ်ပေါ် လူးဝစ် Pasteur နှင့် Emil Roux ဤကာကွယ်ဆေးပထမကိုးနှစ်အရွယ်ပေါ်တွင်ဇူလိုင်လ 6, 1885 ရက်တွင်လူသားတစ်ဦးအပေါ်အသုံးပြုခဲ့သည် 1885 ခုနှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး ယောသပ်သည် Meister ( တစ်ဦးခွေးရူးပြန်ရောဂါခွေးအားဖြင့်ကိုက်ခဲ့သော 1876-1940) ။ 
သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးက5မှ 10 ရက်အတွင်းအဘို့အခြောက်မှခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အားနည်းခဲ့ကွောငျးကူးစက် (နှင့်သေချာပေါက်သေလွန်သောသူတို့သည်) ယုန်ကနေရိတ်သိမ်းဗိုင်းရပ်စ်၏နမူနာများပါဝင်သည်။ အလားတူအာရုံကြောတစ်ရှူး-ဆင်းသက်လာကာကွယ်ဆေးနေဆဲအချို့နိုင်ငံများအတွက်ယခုအသုံးပြုကြသည်, ထိုသူတို့သည်ခေတ်သစ်ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုကာကွယ်ဆေးထက်အများကြီးစျေးသက်သာရှိနေစဉ်, သူတို့ကအဖြစ်ထိရောက်သောမရှိကြပေ။  ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတစ်ရှူးကာကွယ်ဆေးလည်းအာရုံကြောရောဂါများတစ်ဦးအခြို့သောစွန့်စားမှုသယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ခွေးရူးအောင်ကာကွယ်နိုင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ , အလင်း မှစ. Protected , ဒီထက်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှု , ခွေးရူးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အသုံးပြုခဲ့ , ခွေးရူးကာကွယ်မည်ရန်အသုံးပြု , ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ